Ziveliswa njani iiNqanaba zoTshintsho
Umahluko yinkqubo yokufumana ezivela kwezinye . Isiphumo somsebenzi sikuxelela ukuba ukhawuleza kangakanani umahluko wemveliso (njenge Y ) iyatshintsha ngokuthelekiswa nokwahluka kokufaka (njenge x ).
Umzekelo, ukuba Y iyanda amaxesha ama-3 ngokukhawuleza x - Njengomgca Y = 3 x + 5 - emva koko uthi isiphumo Y siyakuhlonipha uku x ilingana no-3, kwaye uyabhala
Oku, kunjalo, kuyafana
kwaye oko akuthethi nto ngaphezulu kokuthetha ukuba inqanaba lotshintsho lwe Y kuthelekiswa ne x ikwi-3-to-1 ratio, okanye umgca unethambeka
Le mibuzo ilandelayo yokuziqhelanisa igxininisa into yokuba isiseko sisiseko nje okanye ithambeka. Ukusombulula ezi ngxaki, konke okufuneka ukwenze kukuphendula imibuzo ngokungathi bakucelile ukuba umisele inqanaba okanye ithambeka endaweni yesiphumo.
Ukuba ushiya ikhaya lakho ngexesha = 0, kwaye ukhawuleze uhambe ngemoto yakho ngeemayile ezingama-60 ngeyure, yintoni
Ikhowudi yeTylenol w 3
isiphumo sokuma kwakho malunga nexesha?
Yintoni ithambeka leparabola
kwinqanaba (7, 9)? (Jonga lo mzobo ulandelayo.)
Isiphumo sisoloko singumlinganiselo, kwaye (ucinga ukuba uthetha ngamazinga akhawulezileyo, hayi amaxabiso aphakathi) ireyithi ihlala ivela kwisiphumo. Ke, ukuba isantya sakho, okanye inqanaba, kunjalo
Uyabona ukuba umgca, Y = 3 x - 12, ubambekile kwiparabola,
kwinqanaba (7, 9). Uyazi ukusuka Y = mx + b ukuba ithambeka Y = 3 x - 12 ngu 3. Kwinqaku (7, 9), iparabola ifana ncam nomgca, ngoko ke isiphumo esivela (ithambeka) le parabola e (7, 9) ikwa-3.
Nangona ithambeka lomgca lihlala lihleli, ithambeka leparabola liyatshintsha njengoko unyuka usuka (7, 9), uyehla uyehla. Nokuba uya ngasekunene nje 0.001 ukuya x = 7.001, ithambeka alisayi kuba ngokuchanekileyo 3.
Eyona fomu ye potassium
imizekelo yentlekele yabantu abaqhelekileyo
yintoni i-atorvastatin ye